သမီးကြီးလေးရယ် ဒုတိယသမီးလေးကိုယ်ဝန်နဲ့ ထူးထူးခြားခြား ရှုတင်လေးတစ်ခုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ချမ်းချမ်း – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ချမ်းချမ်း ကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ ချမ်းချမ်းကတော့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေ စတင်ကာ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ နာမည်ကြီး အဆိုတော် တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
လက်ရှိမှာ ခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့ ကွာရှင်းကာ သမီးလေးကို ကျွေးမွေးရင်းနဲ့ အချစ်စစ်ကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ ကာ ခင်ပွန်းလောင်းရဲ့ သမီးကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရသူပါ.။ ဒုတိယမြောက် သမီးလေး ကိုယ်ဝန်နဲ့မို့ ကလေးမွေးပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စီစဉ်ထားသူ ချမ်းချမ်းက ဇန်နဝါရီလ (၆)ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို “Today shooting!something is really new and super!!!!☺️☺️☺️” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လာခဲ့ပါတယ်.။
ချမ်းချမ်းကတော့ ဒုတိယမြောက် သမီးလေးကိုယ်ဝန်နဲ့ ပိုလို့တောင် အလှပိုကာ ကြည့်ကောင်း လာပါသေးတယ်နော်.။ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ချမ်းချမ်းရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော ခမျြးခမျြး ကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ ခမျြးခမျြးကတော့ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကနေ စတငျကာ အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျခဲ့သူ နာမညျကွီး အဆိုတျော တဈဦးပဲဖွဈပါတယျနျော။
လကျရှိမှာ ခငျပှနျးဟောငျးနဲ့ ကှာရှငျးကာ သမီးလေးကို ကြှေးမှေးရငျးနဲ့ အခဈြစဈကို ထပျမံတှရှေိ့ခဲ့ ကာ ခငျပှနျးလောငျးရဲ့ သမီးကိုယျဝနျကို လှယျထားရသူပါ.။ ဒုတိယမွောကျ သမီးလေး ကိုယျဝနျနဲ့မို့ ကလေးမှေးပွီးမှ မင်ျဂလာဆောငျဖို့ စီစဉျထားသူ ခမျြးခမျြးက ဇနျနဝါရီလ (၆)ရကျနမှေ့ာ ပွုလုပျနတေဲ့ သူမရဲ့ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျတဈခြို့ကို “Today shooting!something is really new and super!!!!☺️☺️☺️” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာတငျလာခဲ့ပါတယျ.။
ခမျြးခမျြးကတော့ ဒုတိယမွောကျ သမီးလေးကိုယျဝနျနဲ့ ပိုလို့တောငျ အလှပိုကာ ကွညျ့ကောငျး လာပါသေးတယျနျော.။ ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ခမျြးခမျြးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။